သင်က Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ်အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို။ ဒေါက်တာ Ralph Esposito; အဲလ်ဆာ Orlandini Psy.D. (2017) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
XXX ရုပ်ရှင်များသည် Erectile Dysfunction ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သလား။ ဒီနေရာမှာမင်းသိထားသင့်တာက
ဒါကြောင့်အရာရာတိုင်းဟာအိပ်ခန်းထဲမှာပူနေပြီးလေးလံနေပြီးသင်ကိုယ်တိုင်မဖျော်ဖြေနိုင်တော့ဘူး။ သင်ကဘာလဲဆိုတာကိုသင်တွေးမိသည်။ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုချစ်ပြီးသူနှင့်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်လိုသည်။ သူမကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနေတာပဲ၊ သူမမှန်မှန်ရွေ့လျားနေတာကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်သင်မတတ်နိုင်တော့ဘူး အားကြီးသောစိုက်ထူရ သူမတောင်းသောအရာကိုပေးပါ။
“ ခင်ဗျားကယောင်္ကျားလေးဖြစ်ပြီးမင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကအရမ်းပူတယ်၊ ဒါဘာပြtheနာလဲ။ တကယ်ကိုထူးဆန်းတာကသင်က porn ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး၊ real-world ပစ္စည်းတွေပဲလိုတာပဲ ရောဘတ် Weissဖောက်ပြန်နှင့်စွဲလမ်းမှုကိုအထူးပြုတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်ရငျးနှီးမှုနှငျ့ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူ၏စာရေးဆရာ အဆိုပါ Doghouse ထဲက.
ဒီအကျွမ်းတဝင်အသံလျှင်, သင် porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED), ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာယောက်ျား၏ကြီးထွားလာနံပါတ်များကိုထိခိုက်ကြောင်းပြဿနာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ conditional တုံ့ပြန်မှု "PIED စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးကိုခေါ်အရာကိုချည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်" ။ "
1 Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ်တစ်ဦးက Myth ဟာလား?
၂ သင်သည် Porn-inced Erectile Dysfunction ရောဂါခံစားနေရပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း
3 ဘယ်လို Long ကဒါဟာ Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် မှစ. Recover ရန်ကိုယူပါသလား
4 သင်က Erectile အလုပ်မဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်လှည့် Porn ရန် Go နိုင်သလား?
1 ။ Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ်တစ်ဦးက Myth ဟာလား?
အခြေခံအားဖြင့်, သင် 70, 80, ဒါမှမဟုတ်နှင့်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၏တောင် 90% ဖြုန်းမယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်း porn - sexy, စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့မိတ်ဖက်များနှင့်အတွေ့အကြုံများ၏အဆုံးမဲ့ပုံရိပ်တွေ - သင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်မှု၏အဆင့်အထိ conditional ဖြစ်လာ, "Weiss ကပြောပါတယ်။ ထို့နောက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်, သင်သည်သင်၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာမိတ်ဖက်မသက်ဆိုင်သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်-The-ဇာတိပကတိအားဖြင့်မိတ်ဖက်သဘောကျတယ်ဘယ်လောက်၏, သိသိသာသာလျော့နည်းလှုံ့ဆော်ရှာပါ။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု ဟုတ်ပါတယ်ရှုပ်ထွေးသည်။ ဖြစ်နိူင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်ဤရောဂါခံစားနေရလျှင်သင်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အကျင့်နှင့်ဆက်နွှယ်သည်ဟုချက်ချင်းမယူဆသင့်ပါ။
"ရှုပ်ထွေးပြီးဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အလွယ်တကူတစ်ခုစိုက်ထူရယူထိန်းသိမ်းနည်းသူတွေကိုစွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်တညျ့နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ၏အကြောင်းတရားများ၏နံပါတ်ရှိပါသည်မဟုတ်လိပ်စာကြှနျတျောတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းကောင်းစွာဖြစ်ကြောင်း "Magnus Sullivan က၏ဖန်ဆင်းရှင်ကပြောပါတယ် ManShop.com နှင့်၎င်း၏အစ်မ site ကို, BetterThanTheHand.com.
အကယ်၍ သင်သည် ED ရောဂါခံစားနေရပါကအကြောင်းရင်းကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပြီးထိုပြcorrectနာကိုဖြေရှင်းရန်သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆီးချိုရောဂါ၊ MS၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းသည် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောပြareနာများဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်သောဆေးကုသမှုလိုအပ်သည်။ အထွေထွေစိတ်ဖိစီးမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများ၊ ကြံ့ခိုင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတို့သည်လည်း ED ၏ဘုံအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။
အမျိုးသားအများစုသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင် (ဥပမာ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ anorexia ဆုံးရှုံးမှု) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအချို့ကိုကြုံတွေ့ရသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုသည်၎င်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တခါတရံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှတစ်ဆင့်၊ အမှန်တကယ်တွင်ပိုမိုကြာရှည်ခံရန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်မိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဒစ်သင်တန်းဖြစ်သည်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသဘောမျိုးဖြင့်ချဉ်းကပ်ပါက ('အော်ဂဇင်မတိုင်မီဘယ်လောက်ကြာကြာတည်ရှိနိုင်မည်နည်း။ အော်ဂဇင်ပြီးနောက်မည်သို့စိုက်ထူနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးပြီးနောက်အော်ဂဇင်ကိုငါရနိုင်မည်လား၊ ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယအော်ဂဇင်? ')၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် ED ကိုသာမကအကောင်းဆုံးသောသင်၏လိင်ဆိုင်ရာအလားအလာများကိုပါနားလည်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် "ဟု Sullivan ကဆိုသည်။ သင့်တွင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြissuesနာများမရှိပါက၊ သင်ကအော်ဂဇင်ပြီးနောက်စိုက်ထူနိုင်သည်၊ သင့်တွင်အော်ဂဇင်များစွာရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ဆည်းဆာနှစ်များ၌ကျန်းမာသောလိင်ဆိုင်ရာဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်သေချာတာပေါ့၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများသည်မကောင်းသောအရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှမပြောပါ ဒါဟာမင်းအတွက်တကယ်ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့်သင် porn ကိုအလွန်ကြည့်နေတဲ့စွဲလမ်းစေတဲ့အရာတစ်ခုရှိသည်။ သငျသညျပိုပြီးဂရပ်ဖစ်ပိုမိုပြင်းထန်သောလိုအပ်ပါတယ်, rougher လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ သငျသညျကိုလှုံ့ဆော်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နှင့်စစ်မှန်သောဘဝရုံအလုံအလောက်မဖြစ်ဖို့စတင်သည်။
သင့်အိပ်ယာပေါ်ရှိထိုမိန်းကလေးသည်သင်ကိုယ်တိုင်စုပ်ယူလိုက်သော virtual reality ကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းပါ။ သင်ဒီမှာ ED ပြissuesနာများရှိပါကအခွင့်အလမ်းများမှာ၎င်းသည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာမဟုတ်ဘဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သည်။ သင်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထသည်စစ်မှန်သောဘ ၀ တွင်လိင်အစာစားချင်စိတ် (သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ anorexia) ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေသည်။ အဲ့ဒါဖြစ် သင်ထင်လိမ့်မယ်ထက်ပို
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်သင်ဟာဝေးလွန်းတဲ့ခရီးကိုသွားနိုင်မယ့်အချက်ပါပဲ။ Armonk Integrative Medicine ဆေးပညာတွင်အလုပ်လုပ်နေသောဆေးပညာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာ Ralph Esposito က“ အမျိုးသားများသည်ရေရှည်ညစ်ညမ်းသောလိင်မှုကိစ္စကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွပေးသည့်သဘောမျိုးအဖြစ်ရှုမြင်တတ်ကြသည်” ဟုဆိုသည်။ “ သူတို့ကအဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှေ့မှာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ကိုလိုချင်သလိုပါပဲ။ ၎င်းသည် dopamine receptor များနှင့်မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုကိုရရှိစေသောအပျော်အပါးရှာဖွေခြင်းစနစ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ”
In-real-ဘဝဆက်ဆံရေး porn နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စောင့်ကြည့်အကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်ပြုမိသုတေသနတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်တွင်မကြာသေးမီကကြောင်း porn စောင့်ကြည့်အများအပြားအမျိုးအစားထဲသို့ကျတှေ့လေ့လာမှုတစ်ခုပြီးစီးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအမျိုးအစား, အပန်းဖြေ compulsive နှင့်အန္တရာယ်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသူတွေကိုပါဝင်သည်။
နောက်ထပ်လေ့လာချက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှ porn စားသုံးမှုချိတ်ဆက်။ ဒီအနတရာယ်ဟာဒီအမျိုးအစားသုံးခုထဲကိုဘယ်နေရာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုများစွာမူတည်လိမ့်မယ် - အပန်းဖြေမှုအမြင်များမှာကြည့်ရှုသူများထက်စိတ်ပူစရာများများရှိသည် - သို့သော်အပြီးသတ်ရလဒ်တွေကသင်ဟာညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ သင့်ရှေ့မှောက်ရှိအစစ်အမှန်ဘဝမိန်းကလေးသည်သင့်အားနှိုးဆွပေးနိုင်ခြင်းထက်ထိပ်ဆုံးခေါ်ဆောင်သွားသောမြင်ကွင်းများမှသူများကိုဤနည်းဖြင့်အသုံးချပါ။ သငျသညျကို virtual ကမ္ဘာကနေတဆင့်အစစ်အမှန်အရာမှ desensitized ဖြစ်လာပါတယ်။ အမှန်ပင်သတ္တိရှိသောကမ္ဘာသစ်။
porn ကျန်းမာသည်နှင့်တို့မှရှောင်ဖယ်သို့မဟုတ်ကုသအပြစ်ဖြေအဖြစ် (ကြှနျုပျတို့အဘို့ moms ခဲ့!), ဒါပေမယ့်အကောင်းတစ်ဦးအရာများ၏လွန်းနေပါစေကြောင်းကောင်းသောအရာသည်အဘယ်အရာ, မကောင်းတဲ့အရာရှိနိုင်ပါသည်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။ သမ္မာတရားကိုလူတွေပိုပြီးယခင်ကထက် porn ကိုကြည့်ရှုသည်။ တစ်ဦးက 2014 အတွက်လေ့လာမှု ယောက်ျားသုံးပုံတစ်ပုံသည်နေ့တိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်က အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာကြီးသည် ပိုမို၍ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုများပြားလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
"ကျွန်မရဲ့လိင်မြှင့်တင်ရန်နှင့်စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်ဖို့ကြိုးစားမယ့် tool တစ်ခုအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသော," ကပြောပါတယ် ဒန် Canfieldတစ်ဦး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူနှင့်အခြေအနေကို၏အသက်တာရှည်ဝေဒနာသည်, လာမည့်စာအုပ်၏စာရေးသူ အဆိုပါပညာရေး Code ကို Hack.
"ကျွန်မနေတဲ့ပုံစံကို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူမွေးဖွားလာကာစိုက်ထူရဖို့နီးပါးအရာအားလုံးကြိုးစားခဲ့ခဲ့သည်။ ငါတပ်ကြပ် Erectile တစ်ရှူး Fibrosis ခဲ့ကတည်းကကံမကောင်းစွာ, ငါသည်ကြိုးစားခဲ့ဆိုနှိုးဆွမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ, porn, ငါ၏စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းပြုလေ၏ငါ့ကိုအလွန်နှိုးဆော်ခြင်းတဲ့မှဦးဆောင် viscerally "Canfield ကပြောပါတယ်။
သုတေသနညစ်ညမ်းအပေါ် overdosing, အချိန်ကျော်, ဦးနှောက်အတွက်သေချာသော receptors desensitizing ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မပြသခဲ့သည်။ "ပညာရေး၏သုံးခုအဓိကအကြောင်းတရားများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည် ဇီဝဗေဒ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် Musculoskeletal။ porn မှစွဲလမ်းအများဆုံးဆက်ဆက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါလိမ့်မယ်။ ငါ၏အမှု၌, ငါသည်သင်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမဆိုပုံစံနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဓိကကြောင်းကိုတွေ့ကြပြီ, "Canfield ကပြောပါတယ်။
ယခုမကြာခဏညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ overstimulation တီထွင်ကြသူဒါကြောင့်များစွာသောလူတို့သညျမြားနှငျ့ အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ သာအသစ်များနှင့်ပိုပြီးလက်တွေ့လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နှိုးဆွပေးခံရဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့သွန်သင်ပြီ။ ဆွကျော်အခြေခံအားဖြင့်, နှိုးဆွပေးခံရဖို့ကပိုခက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အမှန်တကယ်အသားနှင့်အတူမည်သည့် arousal ရှိသည်ဖို့အတှကျနိုင်ရန်အတွက်အာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။
"ဒီမိန်းမကဲ့သို့နှစ်ဖက်စလုံးသူ့ကိုယ်သူနှစ်လိုဖွယ်ရှိသူမ၏မှားတစ်ခုခုစဉ်းစားမရရှာတွေ့ခြင်းငှါအလွန်ဝေးကွာသောဖွယ်ရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်" လို့ပြောပါတယ် အဲလ်ဆာ Orlandini, Psy.D .. လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်နှင့်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းလိင်ကုထုံးလိုင်စင်။
ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, တဦးတည်း၏ဤဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ရှု Reddit အပေါ်အသုံးပြုသူ:
"မကြာသေးမီကကျွန်တော်ဒီမိန်းကလေးကိုအလုပ်ခွင်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရပြီးအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိခဲ့တယ်။ သူမနဲ့သူမဆုံးရှုံးချင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ သူမကိုဟိုတယ်တစ်ခုသို့ခေါ်သွားတယ်၊ ငါတို့ကပုံမှန်အတိုင်းကြိုတင်ကြံစည်ပြီးအရာရာကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းကအဲဒါအတွက်တက်မဟုတ်ခဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၅ နှစ်အရွယ်အပျိုစင်ကဒီကြက်ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုထုတ်ပစ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ကျောက်တုံးကြီးတစ်ချောင်းပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဘာမျှမ, ကပဲ flaccid တယ်ငါ့အဘို့အလွန်ရှက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါထပ်ခါကြိုးစားခဲ့ကြပြီးတူညီတဲ့အရာတော်တော်များများနှင့်သူမသည်ငါနှင့်ထပ်မံအနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသေချာပါတယ်။ အစကန ဦး မှာထူးဆန်းတာကငါ porn ကိုကြည့်တဲ့အခါငါအရမ်းခက်တယ်၊ အရမ်းခက်တယ်၊ ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်ကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်နေတယ်၊ ​​မတော်တဆတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်သင်တက်နိုင်ပြီးအခု ၉ နှစ်နီးပါးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်တာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ”
လျှို့ဝှက်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနှင့်အတူနေထိုင်သည်, သူနှင့်အတူတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝရှိကြောင်းကို သိ. သူ porn ကြယ်များ - ကို virtual အဖွဲ့အစည်းများသူနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ဒီအမူအကျင့်ပုံစံကိုစွဲလမ်းအာရုံနှင့်အလွန်အဘိုးထိုက်သောနိုင်ပါတယ်။
"ငါ့ဖောက်သည်အတော်များများကသူတို့ကိုယ်သူတို့ထိုအကို virtual အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူဤအဆက်ဆံရေးရှိသည်ဖို့ရာအတွင်းအချိန်အိတ်ကပ်ကိုရှာဖွေသူတို့၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်အိပ်ပျော်နေသောနှင့်မအလုပ်လုပ်ရန်မသွားရှာပါ။ သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်တဖြည်းဖြည်းပိုပြီးဝေးလံနှင့်ဒေါသထွက်ဖြစ်လာနှင့်သူတို့၏သစ္စာစိန်ခေါ်နှင့်ဖျော်ဖြေဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုစိန်ခေါ် "ဟုဒေါက်တာ Orlandini ကပြောပါတယ်။
၂။ Porn-inced Erectile Dysfunction ကနေသင်ခံစားနေရရင်ဘာလုပ်ရမလဲ
ဤအဆိုပါအမြန်အဖြေကိုသင် porn မှာရှာဖွေနေကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဘေးဖယ် porn ချပြီးနှင့်အခြားလူများနှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာပျော်စရာအတူကအစားထိုး - မိတ်ဆွေများနှင့်ချစ်ရသူနှင့်အတူအပန်းဖြေ - porn ရန်သင့် conditional တုံ့ပြန်မှုလည်းညှိုးနွမ်းစေပါလိမ့်မယ်။ "အများအားဖြင့်, သင်ပယ်ရှင်း porn ကနေလမ်းလျှောက်လျှင်, သင်၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို လအနည်းငယ်အတွင်းသူ့ရဲ့ပုံမှန်အဆင့်အထိပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ သူကပြောပါတယ်, အခြေခံမှပြန်လာသောလူတခြို့အတွက်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြာနိုင်ပါတယ်, "Weiss ကပြောပါတယ်။
မှတ်စု၏, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုပင်လူပျိုအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ကြောင်းသင်တို့အဘို့အမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင် "တဲ့ Viagra နဲ့တူဆေးဝါးကိုကူညီလိမ့်မည်။ အလားတူပင်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဒဏ်ရာကိစ္စများ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဆိုပါက, သင်သည်ဤစိတ်ဒဏ်ရာကို process အထောက်အကူပြုကုထုံးကိုကူညီလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ပြဿနာ porn ဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာဆက်စပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သို့သော်, ဆေးဝါးများနှင့်အကြံပေးခြင်းကူညီပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင် porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် "Weiss ကပြောပါတယ်။
porn-related erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်သင်၏ဆက်ဆံရေးတွင်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေပါကထိုကိစ္စသည်ဆွဲဆောင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားပြောခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ “ ထိုအခါသင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုသင်ပြောပြနိုင်သည် porn ဖြတ်သငျတို့သသင့်ဦးနှောက်ရဲ့အပျြောအပါးစင်တာပုံမှန်အတိုင်းသင်၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတဖြည်းဖြည်းပြန်သွားဖို့ကိုမျှော်လင့်, "Weiss ကပြောပါတယ်။
"ငါသည်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်တစ်ဦးချင်းပထမဦးဆုံးတစ်ဦးချင်းစီလူတစ်ဦးဖြေရှင်းရန်ပြုပါတစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစုံတွဲအတွက်အတူအလုပ်လုပ်အခါတိုင်း" ဟုဒေါက်တာ Orlandini ကပြောပါတယ်။
“ ဒါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်တာကိုငါတွေ့ရင်သူတို့ကိုအပြည့်အဝအစားအစာထဲထည့်ပြီးခဏလေးရင်းနှီးဖို့ခွင့်မပြုဘူး၊ သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုသူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ဖို့သာခွင့်ပြုတယ်။ သူမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကလိင်ဆက်ဆံပုံကိုပြောင်းလဲဖို့နဲ့အချိန်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးမယ့်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့သိပ်ပြီးပူးပေါင်းမှုမရှိဘဲပြန်လည်ချိန်ညှိမှုအချို့ကိုခံနေရကြောင်းနားလည်ဖို့အားပေးခဲ့ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Orlandini ။
မိတ်ဖက်အချို့ရှိကွောငျးကိုသိရန်အဘို့အဒါဟာသို့သော်ဘုံဖြစ်ပါသည် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အမျိုးမျိုး အပေါ်သွားနှင့်ညစ်ညမ်းပါဝင်ပတ်သက်သည်။ အဘယ်အရာကို၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဦးနှောက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ရဲ့ရငျးနှီးတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ခိုင်မာစေရန်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့ "အဲဒီကိစ္စများတွင်ပါကရှင်းလင်းချက်ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ခဲကျနော်တို့ညစ်ညမ်းစွဲသို့ဆုတ်ယုတ်ဒီလောက်စွန့်နေကြအတိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးငြိမ်းစေလျက်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့ညစ်ညမ်းအားပေးကြဘူး။ "ဟုဒေါက်တာ Orlandini ကပြောပါတယ်။
စူလီဗန်က“ ငါနဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသားအတော်များများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမဂ္ဂဇင်းများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးရှာတွေ့ပြီးနောက်အမျိုးသမီးများမည်သို့သူတို့နှင့်ပြိုကွဲခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အခြားသူများကမူသူတို့ဇနီးမောင်နှံသည်ဆေးကုသမှုခံယူရာတွင်မည်သို့ဖြေရှင်းခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။porn စွဲ'သို့မဟုတ်' 'လိင်စွဲလမ်း။ ' '
"တစ်ဦးကကုထုံးမိတျဆှေသောအမျိုးသမီးမိတ်ဖက်လူလိင်ပြဿနာရှိသည်ဟုထင်သောကြောင့်, သူမ၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဲဒီလိုကြည့်ရှုသောလိင်ကွဲစုံတွဲအားလုံး၏အကြောင်းကို 80% ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ပိုပြီးအမျိုးသမီးတွေပိုမိုကောင်းမွန် masturbate ဖို့တွန်းအားများနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ၏ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ကိုနားလည်ပါလျှင်ယောက်ျားကပိုအလွယ်တကူရီစရာ, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ရှာစေ့စေ့နားထောင်, ဖန်တီးမှုချစ်သူများဖြစ်လာသည်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်လူအသက်ကိုသတ်ခြင်းနှင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်စိတ်ကူးယဉ်ပွညျ့စုံအဖြစ်ဒါပေမယ့်လည်းကိုယျ့ကိုယျကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုကျယ်ပြန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဖြစ်လာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်မသာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ recast နိုင်လျှင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေတနေ့သုံးကြိမ် masturbates သူတစ်ဦးသောသူအားဖြင့်ပယ်ခံရမည်မဟုတ်လော "Sullivan ကပြောလိုက်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ဦးက၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ရှိကြောင်းအာရုံခံ အကယ်. တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူကိစ္စများသူတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့လျော့ချနိုင်သည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ အချို့သောစုံတွဲများပြintoနာကြုံတွေ့ရသောနေရာဖြစ်သည်။ သူတို့ကမလွန်မီအပြစ်တင်ခြင်းနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းကိုစတင်ပေါင်းသင်းသည်။
တိုက်ရိုက်ကျန်းမာရေး-related ပြဿနာများတိုးပွားလာအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်, တိုးမြှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးစိတ်ဖိစီးမှု - အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တော်လိင်နှင့်ဆက်စပ်ကွောကျရှံ့ခွငျး, အမည်းစက်, အရှက်ကွဲ - ဤကိစ္စကို: "ဒီအကြောင်းပြချက်ဝေးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအပျော်အပါး၏အရေးပါမှုကိုကျော်လွန်ချဲ့ထွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ဖိစီးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပြဿနာများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်လိင်နှင့်ကျား, မလှည့်ပတ်တင်းကျပ်လူမှုရေး More သို့ယင်း၏လက်လှမ်းမမီကိုတိုးချဲ့, "Sullivan ကပြောလိုက်ပါတယ်။
၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအတွက်အတားအဆီးတစ်ခုသာမကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေနှင့်သင်၏အလားအလာ၊ သင်၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အလားအလာရှိသောသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူများအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်နိုင်သည့်အလားအလာများကိုလည်းကန့်သတ်ထားသည်။
"ဒါဟာလူအဖြစ်၌နေသောသူ၏အဓိကရန်လျှော့ချခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးခံစားရပုံကို။ ဤရွေ့ကား, အသစ်အသက်အရွယ်မူဆယ်မဟုတ်ပါဘူး: ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသင်တင်ပါးဆုံတွင်းကကြွက်သားတွေခိုင်ခံ့စေခြင်းဖြင့်အသက်အရွယ်အဖြစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် incontinence ဝမ်းကာကွယ်ပေးသည်, စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေခြင်း, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်တိုးမြှင်, ခံစားချက် elevates, စီမံခန့်ခွဲကူညီပေးသည်သိသိသာသာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပြခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်အိပ်ပျော်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် orgasm နိုင်စွမ်းပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးတည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပြန်လည်နေရာချထားရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပြစ်လွှတ်ခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ် သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏မျက်စိ၌တည်၏။ သို့သော်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အစစ်အမှန်အကြောင်းပြချက်ပိုပြီး nebulous ပေမယ် ပို. အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအရာတစ်ခုခုနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိနေတာကို: သင်၏လိင်၏စုစုပေါင်းနားလည်မှုအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်လက်ခံရန်, သင်မည်သူလက်ခံ, "Sullivan ကပြောလိုက်ပါတယ်။
3 ။ ဘယ်လို Long ကဒါဟာ Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် မှစ. Recover ရန်ကိုယူပါသလား
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဟာကလူတစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး ကွဲပြားသွားမှာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသောနေ့ရက်များနဲ့ဆိုးရွားလှတဲ့နေ့တွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ သင်ဆေးစွဲနေပြီးစိတ်စွဲလမ်းနေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၌စွဲလမ်းနေပြီးသင်ကရှောင်နေလျှင်၊ သင်သည်ထိုမူးယစ်ဆေးဝါးကိုခဏတဖြုတ်တောင့်တလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိုက်ထူမှုများ၊ လိင်ဆန္ဒများ (သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်မဟုတ်ဘဲ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်) သို့တဖြည်းဖြည်းပြန်လာသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ သင်သည်စစ်မှန်သောလိင်ကိစ္စမှနောက်တဖန်ပျော်မွေ့လိမ့်မည်။
ဒေါက်တာ Orlandini က“ အစပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်မည်သည့်မိတ်ဖက်နှင့်မဆိုရင်းနှီးမှုအားလုံးထဲကတစ်လအားလပ်ရက်ယူဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဒါကအစာအာဟာရကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဦး နှောက်ကိုပိုမိုကျန်းမာစေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိစေပြီးအမှန်တကယ်လှုံ့ဆော်မှုအတွက်ကျန်းမာတဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့နောက်ကုသမှုစတင်သည်နှင့်ကုသမှုမည်မျှကြာမည်ကိုလူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အချိန်ကွဲပြားနိုင်သည်” ဟုဒေါက်တာ Orlandini ကဆိုသည်။
ဒါဟာတကယ်လိုက်နာမှုနှင့်လက်မှာပြဿနာကိုပြုပြင်တာတွေဦးစားပေးလုပ်ဖို့နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်များ၏စွမ်းရည်ကိုပတ်ပတ်လည် revolve ပါဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပြန်လည်နာလန်ထူမှုလိုပဲသင်ဟာအဆင့်တွေကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်။ သင်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရှောင်ခြင်း၊ သင်၌လက်ရှိတွင်လိင်အဖော်ရှိသလား။ အကယ်၍ သင်သည်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုပါကစစ်မှန်သောလိင်ကိုနှစ်သက်ရန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါ့အပြင်သင်ကြည့်နေတဲ့ porn အမျိုးအစားဟာအရေးပါတယ်။ သင်ဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းပြီးပိုမိုပြင်းထန်သောအရာများကိုရှာဖွေနေပါကစစ်မှန်သောဘ ၀ သည်၎င်းနှင့်အညီနေထိုင်ရန်အချိန်ယူရလိမ့်မည်။
သို့သော်ပြန်ဖွင့်တစ်ဦးအဖြစ်, တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရလာဒ်များရှိနိုင်ပါသည် Reddit အပေါ်အသုံးပြုသူ ရှယ်ယာ:
PMO သည်ကျွန်ုပ်၏ ED ကိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဟုအချိန်အတော်ကြာကတည်းကသံသယရှိနေသည်။ ငါလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောလက်တစ်ချောင်းသာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားတိုင်းအချိန်ကာလတစ်ခုအထိဆင့်ပွားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာရှက်စရာနှင့်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကငါ့ရဲ့ပြsolveနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်၊ ငါ NoFap ကို ၂ လ ၂-၃ လလုပ်တယ်။ ငါဒီအချိန်အတောအတွင်းပြန်သွားပေမယ့်ငါအနည်းဆုံးထပ်မံကျင့်ညစ်ညမ်းမပါဝင်ကြောင်းသေချာစေခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်မနေ့ညကငါတစ်ယောက်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့သည် OkCupid အပေါ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး။ ငါဒီလူကိုသိပ်စိတ်မဝင်စားဘူး ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရုံစမ်းသပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့တွေ့ခဲ့တာ၊ လူတစ်ယောက်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုသိပ်မရှိဘူး၊ ဓာတုဗေဒသိပ်မများတဲ့ပုံပဲ။ ထိုအရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ ဤသူသည်ငါ့ကိုထိ မိ၍ ကျွန်ုပ်၏အမှိုက်များသို့သွားသော ... BAM! ချက်ချင်းနီးပါး, Full MAST ။ ငါကဒါအရမ်းပျော်တယ်။ ငါသာနူးညံ့သိမ်မွေ့သူတစ် ဦး ဦး နှင့်သူတို့၏စိုက်ထူမှုကိုဆင့်ခေါ်ပြီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားသူတစ် ဦး ဦး နှင့်ဤစမ်းသပ်မှုမလုပ်မချင်းလုံးဝပျောက်ကင်းသွားသည်ဟုမပြောချင်ပါ။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်အလွန်အားတက်မိပါသည်။ ငါကောင်းသောအဘို့အ porn နှင့်အတူပြီးပြီထင်ပါတယ်။ ဤစမ်းသပ်မှုသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ သင်၌ porn-induced ED ရှိနိုင်သည်ဟုသင်ထင်လျှင်သင်ပြုကောင်းပြုလိမ့်မည်။ အရှုံးပေးလိုက်ပါ။ ၎င်းသည်အစစ်အမှန်မဟုတ်ပါ၊ လူသားစစ်စစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုမရှိပါ။
သငျသညျ reboot လုပ်ဖို့မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုရှည်ယူလျှင်သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်ကိုတွေ့မြင်နှင့်ညစ်ညမ်းသွားထက်အခြားအရာတစ်ခုခုရှိမယ့်သေချာစေချင်ပေမည်။
4 ။ သင်က Erectile အလုပ်မဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်လှည့် Porn ရန် Go နိုင်သလား?
သငျသညျ PIED (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ညစ်ညမ်း-related ကိစ္စများ) ကိုကြုံခဲ့ရ, ပြီးတော့သင်က porn သုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာမှပြန်လာသောလြှငျ, ကြီးပါပဲ။ တဖန်သင်တို့ဖြစ်ကောင်းအနာဂတ်တွင်ကွာညစ်ညမ်းနေသင့်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူရှုပ်ထွေး, ညာ? "သေချာတာပေါ့, သင်တို့ကိုဖြည့်ညှင်းနှင့်အနာဂတ်တွင်အကျိုးဆက်များမပါဘဲ porn ကိုအသုံးပြုရန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်, သင်မူကား PIED (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အခြားပြဿနာများ) ၏ reemergence ဦးဆောင်အကြီးအကျယ်ပြန်သုံးစွဲဖို့စတင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ခုတန်းတူသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်" Weiss ကပြောပါတယ်။